ကရင်နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား | Radio Veritas Asia
၁။What can we do for our country? မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ ၂။ What can we do with the country? မိမိတိုင်းပြည်နဲ့အတူ ဘာတွေပူးပေါင်းလုပ်နိုင်မလဲ၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတက်ဖို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံကြမှာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်တည်ဆောက်ကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အပေးအယူကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တည်လာဖို့ ဆန္ဒရှိသူအားလုံး ၀ီရိယစိုက်ထုန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမွေးဖွားရှင်သန်ဘို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့ရေခံမြေခံအနေအထားမှာ ၁။Trust ယုံကြည်မှု ၂။ Respect လေးစားမှု ၃။Justice တရားမျှတမှု ၄။Freedom လွတ်လပ်မှု ၅။ Love ချစ်ခြင်း ၆။ Equality တန်းတူညီမျှခြင်း ၇။ Reconciliation ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း ၈။ Collaboration ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ၉။ Unity စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရှင်သန်ဖို့အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာ သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှင်သန်နိုင်တဲ့ ရေခံမြေခံဟာ ဘယ်လိုရေခံမျိုးလည်းဆိုတော့ ၁။ Hostility ဆိုတဲ့ ရန်လိုမုန်းထားခြင်း။ ၂။ Contempt ဆိုတဲ့ အထင်အမြင်သေးခြင်း၊ မထီလေးစားပြုခြင်း။ ၃။ Distrust ဆိုတဲ့ သင်္ကာမကင်းဖြစ်ခြင်း၊ သံသယရှိခြင်း။ ၄။ Fake News ဆိုတဲ့ သတင်းအတု၊ အမှားတွေတည်ရှိနေခြင်း၊ လွမ်းမိုးနေခြင်း။ ၅။ Hate speech အမုန်းစကားတွေဖြန့်ကြဲခြင်း၊ ပျံ့ပွားစေခြင်း ဒါတွေရှိနေရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရှင်သန်ဖို့ ခက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bishop John Hsane Hgyi deliversaspeech on Karen New Year Day (6 January 2019)
Bishop John Hsane Hgyi, Bishop of the Diocese of Pathein, deliversaspeech on the celebration of Karen New Year day held in January 6, 2019 in Taung Su village, Eimme Township, Ayeyarwaddy Region, Myanmar. He begins his address with the two following questions.
What can we do with the country?
All will accept thatacountry to be developed, peace must be existent. So, I encouraged you all to participate in the peace process of building our country not as spectators but as players. Peace is notamatter of “give and take. All must participate in building peace for the country.
In order to beget peace, all those who have great desire must effort with diligence. Foundations that are required to beget peace are as follows:
The elements that are blocking peace to survive are:
Peace is difficult to survive if these elements are existing,
အိမ်​သုံးလက်​နက်​ကိရိယာများ (အပိုင်း ၂)
ကရင်အလံတော်အသုံးပြုရာတွင် သိထားသင့်သောအချက်များ အပိုင် ၃
ကရင်အလံတော်အသုံးပြုရာတွင် သိထားသင့်သောအချက်များ အပိုင်း ၁